मलाई भोक भन्दा काम प्यारो लाग्छ : पिके शेर्पा – rastriyakhabar.com
मलाई भोक भन्दा काम प्यारो लाग्छ : पिके शेर्पा
जिन्दगी एउटा संधर्षको मैदान हो, जसले यो मैदानमा संधर्ष गर्न सक्छ उसले जिन्दगीमा धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन् । हो यो कुरालाई धेरैले आफ्नो सिद्धान्त बनाएर पनि अगाडी बढिरहेका छन् । त्यहि भिडका एक व्यक्ति हुन पिके शेर्पा । जसले नेपालको पर्यटन विकासका लागि अनगिन्ती संधर्षका दिनहरु विताएका छन् । कयौ दिनहरु भोकै सुतेको देखी सगरमाथाको चुचुरोसम्म पुगेका उनका संधर्षले जो कोहि पनि सजिलै पग्लन सक्छन् । उनै पिके शेर्पासँग राष्ट्रिय खबर डटकमका सह—सम्पादक मनिष दाहालले गर्नुभएको कुराकानी :
१. अहिले के गरिरहनुभएको छ ?
अहिले म मिसन टुरिजम भन्ने पत्रिकाको अध्यक्षको रुपमा र पर्यटन सम्बन्धी सचेतना मुलक कामहरु गरिरहेको छु ।
२. कति भयो पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुभएको ?
१७/१८ बर्ष जति भयो यो क्षेत्रमा लागेको ।
३. यो क्षेत्रमा के गर्न आउनुभएको हो ?
मलाई बाल्य अबस्था देखी नै नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई नजिकबाट चिन्ने र नेपालको अबस्था बारे थाहा हुँदैं गयो । त्यसपछि यहि क्षेत्रमा काम गर्ने हेतुले पर्यटन क्षेत्रलाई विकशित बनाउनका लागि यो क्षेत्रमा लागेको हुँ ।
४. यो क्षेत्रमा लाग्दा कस्ता कस्ता दुख सँग सहयात्रा गर्नु पर्यो ?
यो क्षेत्रमा लाग्दा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा लाग्दा पनि दुख चाहि अबश्य गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा लाग्दा हावा, हुरी लगायत सबै चिजलाई खप्दै हिड्नु पर्छ र प्राकृतिक सम्पदाहरु हेर्दा रमाइलो पनि लाग्छ । प्राकृतिक सौन्दर्यहरुले भोक मेटाउने पनि काम गर्छन । र जब म ताप्लेजुङको साघुँ गाँउबाट काठमाडौं छिर्दा मैंले कोहि पनि चिनेको थिए । काठमाडौं छिर्दा मैले सुरुमा पर्यटकहरुको भारी बोक्ने काम पाए । दिनभरी भारी बोक्दा त्यहि ८० रुपैयाँ जति आउँथ्यो । यो ८० रुपैयाँले मलाई कोठा भाडा सम्म तिर्न पुग्दैन थियो । त्यति मात्र होइन मलाई खान पनि पुग्दैंन थियो । पर्यटकहरुले दिएको केहि टिप्सहरु भने जोगाएर ल्याउने गर्थे र यसैले कलेजको फि तिर्नु पर्थ्यो । र त्यो पैसाबाट खान समेत नपुग्ने भएपछि मैंले केहि विद्यार्थीहरुई ट्यूबसन र प्रढशिक्षा पढाउने काम गर्थे । त्यति मात्र होइन म गलौचा कारखानामा काम पनि गर्ने गर्थे । यि र यस्ता धेरै दुख गरेको छु ।
५. गाँउमा रहदाँ चाहिँ के कस्ता दुख गर्नु पर्यो, घरको अबस्था कस्तो थियो नी ?
मेरो पारिवारिक अबस्था निकै कमजोर थियो । गाँउमा पढ्नु पर्छ भन्ने चेतना थिएन । बर्षमा एक महिना पनि स्कूल पुग्न गाह्रो हुन्थ्यो किनकी धेरै जसो पारिवारिक काम गर्नु पर्थ्यो । मैले घरमा बस्दा डोको बुन्ने, घुम बुन्ने र चोयाको सम्पुर्ण कामहरु गर्थे । सानै हुँदा पनि गोरु जोत्ने, बाउसे गर्ने, खन्ने, धान कोदो रोपाइ गर्ने, घाँस दाउरा, भाई बहिनीहरु हेर्र्ने, भान्सामा भात पकाउने देखी महिलाले गर्ने कामहरु पनि म सम्पुर्ण गर्थे ।
६. तपाईले सगरमाथा पनि चड्नु भएको छ ? त्यहाँका केहि दुखहरु भन्दिनु होस् न ?
म सगरमाथा चड्दा त्यहि ३३ बर्षको थिए होला । म सगरमाथा चड्दै गरेको बेला मैले त्यहाँको भिडियो र फोटो खिच्दै थिए र मेरो अक्सिजन सकिएको मलाई नै थाहा भएन र मलाई सास फर्ने नै निकै गाह्रो भएको थियो र त्यति बेला मैले जीवन र मृत्यु दुबैको दोसादमा पर्नु परेको थिए । र मैंले अर्कैको अक्सिजन खोसेर खाएको थिए । सगरमाथा चड्दाका पनि निकै दर्दनाक दुखहरु छन् ।
७. सगरमाथा चडिरहदाँ फर्केर आउछु भन्ने थियो की थिएन ?
मैले केहि सुरक्षा त अपनाएर नै गएको थिए तर ग्यारेन्टी चाहिँ हुदैंन थियो । म मर्न पनि सक्थे र बाँच्न पनि सक्थे किनकी त्यहाँ पुगेपछि के हुन्थ्यो भन्ने थाहा हुदैन थियो । सगरमाथा चड्दा बाँच्छु नै भनेर भन्न सकिदैंन । र मैले पनि त्यहि सोचेर चेडेको थिए । अर्थात यो भनौ जीवनको आहुती नै दिएर चडेको थिए ।
८. सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपनि कस्तो अनुभुती गर्नुभयो ?
एक पटक त मैंले संसार जितेको झै आभाष भयो र मलाई त्यति बेला देखी देशका लागि केहि गर्नु नै पर्छ भन्ने भान भयो । म सगरमाथाको चुचरोमा पुगेपछि मलाई म सगरमाथा भन्दा पनि अग्लो भएछु भन्ने लाग्यो । त्यसपछि सगरमाथाबाट झरेपछि मैंले एउटा के सोच बोके भने अब पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्छु भन्ने लाग्यो र अहिले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हिडिरहेको छु । तर यहाँ काम गर्न भने जस्तो सजिलो छैंन यहाँ धेरै बाधा अडचनहरु छन् र म त्यसलाई चिरेर पनि अगाडी बढ्छु भन्ने लागेर अहिले यहि क्षेत्रमा संधर्ष गरिरहेको छु ।
९. यो दिनसम्म आइपुग्दा कयौ दिन र रातहरु भोक भोकै सुतेको पनि याद छ ?
मलाई काम प्यारो लाग्छ र म कामकै पछाडी लागेको हुन्छु । धेरै पटक ट्रेकिङ्ग गर्दा खाना समेत पाएको थिइन । ३÷४ दिन सम्म खाना नपाएको पनि याद छ । अनि धेरै पटक विहान खाएको एक मुठी चिउराको भरमा पनि म बाँचेको छु । यस्ता धेरै दुखहरु छन् जुन शब्दमा भन्न सकिन्न । र मैले सामाजिक काम गर्दा पनि मैले आफु भोकै भएर पनि अरु अघाउनु पर्छ भन्ने लागेर कयौ दिनहरु भोकै सुतेको छु, म आफु दुखी भएर अरु खुसी हुनु पर्छ भन्ने लागेर सधै अरुलाई खुसी बनाउने काम गरेको छु । मैंले सामाजिक काम गर्दा पनि निकै धेरै दुख गरेको छु । सामाजिक काम गर्दा कयौ पटक भाडा नहुँदा हिडेर समेत पुगेको याद छ मलाई । म सधै आफ्नो लागि भन्दा पनि अरुको खुसी चाहने मान्छे हुँ । म सधै व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको लागि चिन्ता लिइरहेको हुन्छु ।
१० . तपाईले यतिका धेरै दुख गर्नु भएको छ । आखिर जिन्दगी के रहेछ तपाईको नजरमा ?
जिन्दगीलाई जसरी चलायो त्यसरी नै चल्छ । तर जिन्दगी जिउँने क्रममा देशका लागि केहि गर्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ । पहिला सुरुमा आफुलाई म को हुँ भनेर चिन्नु पर्छ अनि मात्र अरुलाई चिन्न सकिन्छ । त्यसैंले मेरो विचारमा जिन्दगी एउटा संधर्षको मैदान हो जस्तो लाग्छ । र जिन्दगी एउटा चुनौती पनि हो र अवसर पनि हो ।
११. अन्तत : अबका दिनमा के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
अबका दिनमा पर्यटन क्षेत्रमै केहि गर्ने सोचका साथ लागेको छु । मैंले सधै पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर छलफल, चिन्तत, मनन पनि गरिरहेको छु । मैंले सधै भन्ने गरेको छु पर्यटनको विकास राष्ट्रको निकास हुन सक्यो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास हुनेछ । र सिंगो राष्ट्रलाई नै पर्यटन क्षेत्रले धान्न सक्छ । र यो विषयमा म मात्र होइन अब सबै लाग्नु पर्छ ।
आइतवार, साउन १७, २०७२ मा प्रकाशित
Purbeli Kanxa says:
Dai tapaiko bichar bujhera ta aba ma sanga kunai sabdanai xaina.sabai Nepali haruko soch tapaikai jasto bhaidiye ta..
Subhas Pangma says:
म तपाईं प्रती गर्ब गर्छु पूर्ण दाई
Pk Sherpa says:
Rupa Maharjan says:
Great man ….. do best….
great vision pk dai have good luck.
pk jee ko vision thik 6
असोज १ गतेबाट त्रिविका सबै क्याम्पस खोल्न निर्देशन (सूचना)
माधव नेपालले गरे पार्टी कार्यालय बारे जानकारी दिँदै यस्तो ट्वीट
हतारमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न मन्त्रालयकाे निर्देशन
१२ सीडीओसहित १६ जनाको सरुवा, काे कहाँ पुगे ? (सूचिसहित)
दार्चुलामा विद्यालय भवन बगाउँदा त्रिपालमुनि कक्षा संचालन